Dr. Tint Swe's Writings: October 2017
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ ဦးနှောက် နဲ့ ဦးဏှောက် ဘယ်ဟာအမှန်လဲ သိပါရစေရှင့်။
တုဏှိဘာဝေ = ဆိတ်ဆိတ်နေ
တုဏှိဘော = မတုန်မလှုပ်
ဒီကဗျာကို ဆရာဇော်ဂျီ ရေးသားသီကုံးခဲ့ပြီး (တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၈၊ အမှတ် ၁ဝ၇၊ ဒီဇင်္ဘာ ၁၉၃၃) မှာ ပဌမဆုံးပုံနှိပ်ပါတယ်။ ပန်းကံ့ကော်စာစဉ်၊ ငြိမ်းစာစဉ်၊ သီးခြားထုတ်၊ ၁၉၆၄ ထဲမှာ သည်လိုပုံနှိပ်ထားပါတယ်။
စာပေလောကစာအုပ်တိုက်၊ ဇွန်၊ ၁၉၉၈ ထုတ် ဇော်ဂျီ ကဗျာပေါင်းချုပ်ထဲမှာတော့ -
ငါ့လမ်းဟာ သည်တစ်ဖက်ရယ်လို့ နဲ့ ခါတစ်နေ့တွင်ဖြင့် လို့ (တ) နေရာတွေမှာ (တစ်) လို့ရိုက်နှိပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီ သတ်ပုံမှားတယ်လို့ ပြောလိုတာလား မသိပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာမှာ ကိုယ့်သတ်ပုံနဲ့ရေးတာ သိပ်မပြောလိုပါ။ တကယ့်အထင်ကရ လူတိုင်းက လေးစားအားထားရတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတွေရဲ့စာတွေကို ကိုယ်ပိုင်သတ်ပုံနဲ့ ပြင်ရိုက်ကြတာ မသင့်လျှော်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီထက်ပိုမှန်တဲ့ အဲဒီကဗျာဆရာ ဘယ်သူလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဆရာ မရွေ့ရှားလို့မှာ ရှားကအမှန်လား လျားကအမှန်လားခင်ဗျာ။
ဟုတ်။ ဆရာရိုက်တာကို မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ သတ်ပုံကျမ်းအမှန်ကို သိချင်တာပါဆရာ။
ရွေ့လျောသည်။ ရွေ့သွားသည်။ တရွေ့ရွေ့။ ကာလရွေ့လျော။ သွား၍ လာ၍။ ကြုံသ၍။ (၍့ လို့ အရင်က ရေးခဲ့ကြပါတယ်။)
ရှားစေး။ ရှားပင်။ ရှားပါးစရိတ်။ ထင်ရှားကျော်စော။ ရှောင်ရှားသည်။ ရှားမီးခဲ။ ရှားချက်သည်။ ရှားစောင်းကြီးပင်။
ရှောင်ကြဉ်။ ရှောင်ခွါ။ ရှောင်ဖယ်။ ရှောင်ရှား။ ရှောင်သွေ။ ရှောင်တိမ်း။ တရှောင်ရှောင်။ ခေါင်းရှောင်။ ရှောင်တခင်။
လိုက်လျောသည်။ လျောပြွမ်း (ရောနှော) သည်။ လျောကျသည်။ ချောလျော (မကျက်သော ပဲနောက်ဟင်းကဲ့သို)။ အလျောတဝင်။ လိုက်လိုက်လျောလျော။ မကောင်းလိုက်လျော၊ ကောင်းလိုက်လျော။
လျား = ကြာမြင့်သည်။ ကစဉ့်ကလျား။ စုလျား (အပေါ်တင်ပုဆိုးအဖြူ)။ ကလျား (ဖရိုဖရဲ)။ ပါးလျား။ ကာလရှည်လျား။ အနံအလျား။ အိမ်တန်းလျား။ စောင်းလျားပင်။ ဘာသာလောက်လျား။ သနစ်ကြောင်းလျား။ ဆံပင်ဖါးလျား။ မဟုတ်မလျား။ လျော့လျား။ လတ်လျားလျား။
အမေရိကန်တွေသာ ခရေးဇီးဖြစ်တဲ့ အားလပ်ရက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းလှန်ရင် နှစ် ၂ဝဝဝ ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ သရဲပွဲလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ခရစ်ယန်ဘာသာတွေသာလုပ်ကြတယ်။ အမေရိကကိုအသစ်ရောက်လာကြတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဝေးလ်စ်နဲ့ စကောတလန်နယ်သားတွေကနေ အရင်ကျင်းပနေတဲ့နည်းနာတွေ ဆောင်ပုဒ်တွေကို မွမ်းမံရာကနေ ကနေ့လို ဖြစ်လာတယ်။ Trick or Treat လို့ပြောကြတယ်။ လှည်ဖျားမှုနဲ့ အစားအသောက်။
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ညမှာ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ဝိညာဉ်တွေက နေအိမ်တွေကို ပြန်လာသတဲ့။ တစ္ဆေသူရဲအဖြစ် လာမယ်။ အဲတာတွေအိမ်ထဲမဝင်နိုင်အောင် အိမ်အဝမှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ ချထားပေးရတယ်။ အိမ်ရှင်တွေကလည်း သူရဲအဝတ်အစားတွေဝတ်ထားတော့ တကယ့်သူရဲတွေက သူတို့လိုသူရဲ့ဖရင်းတွေပဲမှတ်အောင် အယောင်ဆောင်ရတယ်။
တကယ်တော့ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါ။ စီးပွါးရေး။ ကနေ့ အမေရိကမှာ ခရစ်မတ်ပြီးရင် ဒုတိယလိုက်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ၈့၎ ဘီလီယန် ဒေါ်လာ သုံးခဲ့ဖြုန်းခဲ့ကြတယ်။ သူရဲအဝတ်အစားအတွက် ကုန်တာက များတယ်။ လက်ဆောင်၊ ချောကလက်နဲ့ စားစရာ သောက်စရာတွေအတွက် သုံးကြတာ။ ရွှေဝါရောင်ဖရုံသီး အကြီးကြီးတွေကို ပုံစံဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်။ တစ္ဆေသူရဲ ပုံပြင်တွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ လင်းနို့၊ ကြောင်၊ ဇီးကွက်၊ အရိုးစုပဒေသာ၊ စုန်းမတွေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း မနေ့က ကျောင်းကနေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပုံးလေးတပုံးရတယ်။ ပျော်စရာလို့ မထင်ပါနဲ့ဦး။ ကိုယ်ကနေ အဲလိုလက်ဆောင် ၂ ပုံး သူများကိုပေးရမှာတဲ့။ ကုန်မှာပေါ့။
၁။ ချင်း နဲ့ ခြင်း ချဉ်ခြင်းတက်တယ် တခုခြင်းစီ ပြပါ
၂။ ချင်းသုပ်ကအမှန်လား။ ဂျင်းသုပ်၊ ချင်းသုပ် လူအတော်များများကမှားတယ်တဲ့။
အရင်ခေတ်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာတော့ ချင်းလို့သာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ချင်း နဲ့ ဂျင်း နှစ်ခုလုံး သုံးကြပါတယ်။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ဟင်းချက်တဲ့အထဲထည့်တာ ဆေးဖက်ဝင်ရန်သုံးစွဲတဲ့ဂျင်းတတ်က စာနဲ့ရေးရင်ချင်းလား ဂျင်းလားရှင့်
၄။ ချင်းသုပ်ကအမှန်လား။ ဂျင်းသုပ်၊ ချင်းသုပ် လူအတော်များများက မှားတယ်တဲ့။
၅။ ကံကောင်းချင်းတွေ အိပ်ထဲမှာအပြည့်အလျှံပါပါစေဆရာ
ကံကောင်းခြင်းတွေလို့ ရေးရတယ်။ အိတ်လို့ ရေးရတယ်။ သည်အတိုင်းဆိုရင် ချင်းလူမျိးတွေ အိပ်ပျော်နေသလို ဖြစ်သွားမယ်။ Smile!
အိန္ဒိယမှာ မနက်ခင်းလက်ဖက်ရည်ထဲ ဂျင်းထည့် သောက်ကြတယ်။ ဦးဂိုအင်ကာရဲ့ မွန်ဘိုင်းနားမှာရှိတဲ့ ဓမ္မဂီရိ ဝိပဿနာစခန်းမှာ ဂျင်းပြုပ်ရည် လုပ်ပေးထားတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ မြန်မာစာအရေးအသားမှာ ဘုန်းကြီး ဖုန်းကြီး ဘယ်ဟာက အမှန်ပါလဲခင်ဗျာ။ ရှင်ဥက္ကဌ စာအုပ်မှာ ဖုန်းကြီးလို့သုံးထားတယ်။
ဖုံးဖွက် = စလောင်းဖုံး
ဘုန်းညွန့်မပွါး = ကောင်းမှုကုသိုလ်မပွါး (ပျို့)
ဘုန်းတော်တောက်ရွှန်း ဘုန်းတော်ထွန်း၍ ဘုန်းပန်းပွင့်လှိုင် ဘုန်းနံ့ကြိုင်က ဘုန်းပြိုင်မထင် ဘုန်းထွတ်တင်ကား ဘုန်းရှင်သမ္ဘာ ဘုန်းစကြာမြင့် ဘုန်းအာနုဘော် ဘုန်းမြတ်ကျော်သည် ဘုန်းတော်ကြီးလှ ဘုန်းကြောင့်သော (ရှင်မဟာရဋ္ဌရေး)
ဘုံးပတီး = အပေါ်တင်ပုဆိုး
ဖုန်းငရဲ = ငရဲဘေးသင့်သည်
ဖုန်းစား = ဖုန်းတောင်း = တောင်းစားသူ
ဖုန်းဆိုး = ရွာကုန်း လယမြေယာအဟောင်း
မင်္ဂလာပါဆရာ မြန်မာစာအရေးအသားမှာ ကံ ကမ် ဘယ်ဟာက အမှန်ပါလဲခင်ဗျာ။ ရှင်ဥက္ကဌ စာအုပ်မှာ ကမ်လို့ သုံးထားလို့ပါခင်ဗျာ
ကမ္ပလာ = အထည်အလိပ်
ကမ္ပလွေ = စာပုလွေ
ကမ္ဗည်းတံ = ဝါးခြမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစာရေးတံ
ကမ္မစန်း = ဗေဒင်
ကမ္မစုကတ် = ဗေဒင်
ကမ္မဇ = ကံကြောင့်ဖြစ်သော
ကမ္မလလေ = လေရောဂါ
ကမ္ဗောဇကျမ်း = ဆင်ကျမ်း
လူတန် ကံချ (လူမတန် ကံချ)
၁။ ဆရာရေ ဖိတ်ကြားစာ နဲ့ ဘိတ်ကြားစာ ဘယ်ဟာမှန်လဲအလင်းပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ
မဖြေခင် ပြောချင်တယ်။ အလင်းပြပေးပါလို့ အတော်သုံးနေကြတယ်။ မသုံးသင့်ပါ။ မှောင်မည်းနေချိန်မှာ အလင်းရောင် ပေးခိုင်တာမှာသုံးတယ်။ တန်ခိုးရှိသူဆီကနေ တောင်းခံတာမှာသုံးတယ်။ ကျွန်တော်လို ရိုးရိုးလူ ရိုးရိုးဆရာဝန်ကိုမေးရင် ရိုးရိုးလေးသာရေးသင့်ပါတယ်။
၂။ အရင်က ဘိနပ်မစီးရရေးပြီး ခုတွေ့ရတာ ဖိနပ်မစီးရ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ ဖိနပ်ချွတ်ပါ နဲ့ ဘိနပ်ချွတ်ပါ ဘယ်ဟာအမှန်လဲ အချိန်ရလျှင်ဖြေကြားပေးပါဆရာ။
၄။ ဘိသိတ်သွန်း။ ဘိတ်သိတ်မြှောက်မှာသုံးတာတွေ့ဘူးပါတယ်ဆရာ
၅။ ဆရာ ဘိတ်သိက်လို့ရေးတာ အမှန်လား။
ဘိနပ်၊ ဖိနပ်၊ ဘိစီးနှိပ်စက်၊ ဖိစီးနှိပ်စက် နှစ်မျိုးလုံး ရေးနေကြတယ်။ ဖိနပ် အမှန်။ ဘိသိက်မြှောက်သည် အမှန်။
ဘိတ်ကြား၊ ပင့်ဘိတ်၊ ဘိတ်ခေါ်၊ ဘိတ်မန်သက လို့ရေးကြတယ်။ မွန်စာအရ ဖိတ်ကြား၊ ပင့်ဖိတ်၊ ဖိတ်ခေါ်လို့ရေးတာက ပိုမှန်မယ်လို့ လေ့လာရပါတယ်။
ဘိသိက်မြှောက်သည်က ပေါရာဏစကားကနေလာတယ်။ အဘိသိတ္တ = အဘိသိက် သွန်းလောင်းအပ်ပြီးသော = ဘိသိက်မြှောက်အပ်ပြီးသော။
ဘိသိက်သာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိတ်သိက်၊ ဘိတ်သိက်ဆရာ မှားတယ်။ ပိတ်ကို ဘိတ်သံထွက်ကြတယ်။ နောက်ဆုံးပိတ်ကို နောက်ဆုံးဘိတ်သံ ထွက်ကြတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင်။ NSAID link လေး ပြန်တင်ပေးပါ ဆရာရှင့်။ ပြန်ရှာတာ မတွေ့လို့ပါဆရာ။
NSAID ဆိုတာ Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (စတီရွိုက်) မပါတဲ့ အရောင် သက်သာဆေးတွေဖြစ်တယ်။ နေရာတကာမှာသုံးတယ်။ အိမ်တိုင်းမှာလဲ ရှိတတ်တယ်။ ဝယ်ရတာလဲ အင်မတန်လွယ်တယ်။ ထိရောက်မှုလဲ ရှိတယ်။
အပ်က အပ်နှံသည်အဓိပ္ပါယ်ရလို့ သင့်ပေမဲ့ အသံထွက်ကိုယူတာ မဟုတ်ပြန်ပါ။ အပ်ထားတာက သိမ်းထားပေးပါ စောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ ဆိုလိုတယ်။ ကလေးကျောင်းအပ်တာနဲ့တူတယ်။ ထပ်ဖြည့်တာတော့ မဟုတ်ပါ။
တပြား၊ တကျပ်၊ တဆယ်ကျပ်၊ တရာကျပ်။
ပိုက်ဆံဆိုတာ ဟင်ဒီစကားကနေလာတယ်။ သူတို့က ပိုက်ဆားနဲ့ ပိုက်ဆေးလို့အသံထွက်ကြတယ်။ ပိုက်စံဆိုရင် မှားတယ်။
Photos from Felix Wu Htay ကျေးဇူး။
၁။ ဆရာ အအေးပက်မယ် လို့ရေးတာလား၊ အအေးပတ်မယ်လို့ရေးရတာလားရှင့်။
၂။ ဆရာ ပက်သက်၊ ပတ်သတ် ဘယ်ဟာက အမှန်ဖြစ်ပါလည်းခင်ဗျာ
၃။ ဆရာ ဘယ်လိုစမ်းသက်မှုမျိူး လုပ်ရပါလည်ဆရာ။
၄။ ပါတ်နဲ့ ပတ်ရဲ့ အသုံးကိုလည်း တိတိကျကျသိချင်လှပါတယ်။
ပက်ကား = ညွှန်အိုင်
ပက်ပည် = ရင်ဆိုင်တည့်တည့်
(အွန်လိုင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ ပါတ် တခုမှထည့်မထားပါ။)
သမ္မတဆယ်စောင်တွဲမှာလည်း သတ်ပုံတွေက တစ်လုပ်မထားဘူးဆရာ။
အဲဒီသမ္မတခေတ်က မြန်မာစာကို မှန်အောင်ရေးခဲ့တယ်။ ဥက္ကဌကြီးတွေနဲ့ နောက်သမ္မတတွေခေတ်မှာတော့့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ကနေ ကယ်တင်နိုင်မလား
၃ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၅ နေ့ထုတ် နာမည်ကြီး နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီမဂ္ဂဇင်းမှာ Christian Caryl (ခရစ်ရှန် ကရိုင်းလ်) ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဂဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ မြင့်မြတ်မှုကင်းလှတဲ့ မဟာမိတ်ပြုမှုကနေ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေးကို လမ်းကြောင်းပြောင်းစေနေပါတယ်။
နိုဝင်္ဘာ (၈) ရက်နေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လွှတ်တော်သစ်အတွက် မဲပေးကြပါတော့မယ်။ အဲတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ ပဌမဆုံးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းရဒီမိုကရေစီအတွက် ပြောရရင် ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပဌမအကြိမ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်မှုတွေက ကျောက်တုံးသာခင်းထားတဲ့ လမ်းပေါ်သွားလာရသလိုပါပဲ။ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမှုတွေ၊ ကြိုးကြားအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုတွေ၊ မသမာမှုတွေနဲ့ တခြားအားနည်းချက်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက သတိပေးနေကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ကြိုးစားဖြေရှင်းပါတယ်ဆိုပေမယ့် ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ဝန်းကျင်ဟာ အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်ကွပ်ထားချိန်မှာဖြစ်တယ်။ မဲပေးစည်းမျဉ်းတွေကလည်း စစ်တပ်အလိုကျရေးဆွဲထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အခြေခံထားတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ လေးပုံတပုံ လွှတ်တော်နေရာတွေကို စစ်တပ်အတွက်ချန်ထားဘို့ပါနေတယ်။ ဆိုလိုတာက ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်ကတည်းက စစ်တပ်ကနေ အသာစီးယူထားပြီးဖြစ်တယ်။
ဒါတွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ အဲဒီအန္တရာယ်ကြီးထက် ပိုဆိုးတာရှိပါသေးတယ်။ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးမှာအသုံးချနေတာက ပါဝါတွေအများကြီးရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလစောစောပိုင်းတုံးက (မဘသ) ခေါ်တဲ့အဖွှဲစည်းကြီးကနေ နိုင်ငံရေးပွဲမြန်မာပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ ရန်ကုန် အားကစားကွင်းထဲမှာလုပ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်နဲ့ လူဦးရေ တသိန်းတက်ရောက်ပြီး လွှတ်တော်မှာ အနိုင်ရသွားတဲ့ဥပဒေ (၄) ခုကို ထောက်ခံတဲ့အောင်းပွဲလို့ဆိုပါတယ်။ အဲတာတွေက လူနည်းစုမွတ်ဆလင်ဦးရေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်တပါးက တိုင်းပြည်မှာအဲလိုဥပဒေလိုအပ်တယ်။ လူတွေကို ဖျက်ဆီးမယ့် သူတွေရန်ကနေ အကာကွယ်ပေးရမယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်က သာမန်မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးမယ့် ခွေးရူးနဲ့နှိုင်းပြီး ဟောပါသေးတယ်။ သူ့ကိုဝေဘန်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း မကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့နှိုင်းပြောပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုအသံကျယ်ကျယ်ထွက်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှုရှိနေတာကိုက မကောင်းပါ။ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာလိုလို ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ရှိပါတယ်။ တကယ့်ထင်ရှားတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းချက်ကတော့ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ အစိုးရနဲ့ပေါင်းလုပ်နေနိုင်သလည်း၊ ဘယ်အထိစခန်းသွားချင်သလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (မဘသ) ဟာ အစိုးရ ထောက်ခံမှုနဲ့သာ အဲလို အားကစားကွင်းကြီးထဲမှာ အခန်းအနားလုပ်နိုင်တာပါ။ ဒါ့ပြင် အစိုးရပိုင်တီဗွီကနေလည်း ထုတ်လွှင့်ပေးပါသေးတယ်။ မှတ်မိသလောက်ကာလအတွင်း ဘယ်လိုအသင်းအပင်းကိုမှာ အဲလိုပသားပေးခဲ့တာမျိုးလည်း မကြုံဘူးပါ။ သမတဦးသိန်းစိန်ကိုပဲ သူတို့ ကျေးဇူးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ နီဂုံးမှာ သမတကြီးကို ကျေးဇူးစကားမြွက်ကြားလို့ ဒီအချက်ဟာ ဖုံးစရာမလိုတော့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ (မဘသ) အဖွဲ့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ကြိမ်ဖန်များစွာ စွက်ဖက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြာလာလေလေ အဲဒီအဖွဲ့ဟာ အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်တာ ထင်ရှားလာလေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ (မဘသ) တာဝန်ရှိသူတွေကနေ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကို သူတို့ ဥပဒေတွေကို ထောက်ခံလား မထောက်ခံလား လူသိထင်ရှားမေးလာပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုတော့ မဟုတ်ပါ။ အဲတာတွေကို ထောက်ခံသူတွေဟာ စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေကပဲ ကြီးစိုးထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကသာဖြစ်ပါတယ်။ (မဘသ) အဖွဲ့ကနေလည်း ကျေးဇူးတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူတို့အတွက် မဲဆွယ်ပေးပါတယ်။
ပိုဆိုးလာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ အနောက်နိုင်ငံသံရုံး (၉) ခုကနေ ဘာသာရေးလက်နက်ကို ခွဲခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရေး ရွေကောက်ပွဲကင့်ပိန်းမှာအသုံးချတာ အပေါ်အမြင်သဘောထား ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်တယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ အစိုးရပိုင်းကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကို မွတ်ဆလင်တွေကိုဦးစားပေးတယ်လို့စွပ်စွဲပြီး ထပ်ခါတလည်း ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ NLD ဟာ သိသာမြင်သာစွာပဲ ခံဖက်ကချည်းနေခဲ့ရတာပါ။ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့လည်း ကင်းရှင်းအောင် သတိထားခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၄-၁ဝ% လောက်ရှိမယ့် မွတ်ဆလင် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုလို့ တယောက်မှ မရွေးခဲ့ပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာလည်း မပါတာပြောစရာမလိုတော့ပါ။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကလည်း အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်မယ့် မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ ရွေးကြဘို့ သတိပေးထားပါတယ်။ အဲတာဟာ ကွယ်လွန်သူဗြိတိသျှလူမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာသာရေးကို ကိုယ့်ုနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် သုံးနေတာရဲ့လားရာကိုကြည့်ရင် အကြောင်းပေါင်း များစွာအတွက် ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပဌမတချက် ဥပဒေပိုင်း။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာ အားနည်းချက်တွေအပြင် ဘာသာရေးကိုခွဲခြားမှုမပြုဘို့ ပါနေတယ်။ ဒါ့ပြင် ဘာသာရေးကနေ နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ရိုက်ပတ်သက်တာကိုလည်းတားမြစ်ထားပါသေးတယ်။ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ကကတော့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသေအလဲကာကွယ်မယ်ပြောထားတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှာကိုလည်း အပြင်းအထံဆန့်ကျင်ကြတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အဲဒီမှာပါနေတာတွေကို ကာကွယ်ရမယ့်အစား ချိုးဖေါက်နေတယ်။
ဒုတိယအချက်။ အဲလိုဘာသာရေအစွန်းရောက်မှုကို တရားဝင်ပြုလိုက်ခြင်းကြောင့် အစိုးရကနေ လူနည်းစုတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို တားမြင်နိုင်စွမ်း လျှော့နည်းစေပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေစတဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက မွတ်ဆလင်တွေ ထောင်နဲ့ချည်ပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာနေရာရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ လူမျိုးတုံးစေမှုသတိပေးချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာစေတယ်။
တတိယ။ (မဘသ) ကနေ အစိုးရနဲ့ လက်ပူတတွဲလုပ်နေခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေးအာဏာရှင်စနစ်ဆီကို တွန်းပို့ရာကျတယ်။ သည်အတိုင်သာဆက်သွားရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်တွေက နိုင်ငံရေးမှာ တကယ့်အာဏာရလာကြမယ်။ အဲတာကနေ (လက်ရှိအာဏာရှင်ဟောင်း + ပေါ်ပြူလာဘာသာရေး အစွန်းရောက်ဘုန်းကြီး) တွေရဲ့ အော်တိုကရေစီ အသစ်တမျိုးဖြစ်လာမယ်။ အဲလိုဖြစ်လာချိန်မှာ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမယ်။ ကမ္ဘာမှာပြည်တွင်းစစ် အရှည်ကြာဆုံး တိုင်းပြည်ရယ်လို့ ပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။
သိထားသမျှ အော်တိုကရေစီဆိုတာ အစိုးရနဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ပူးပေါင်းတာကနေ နှစ်ခုလုံးဟာ အဆုံးမှာ နိဂုံးချုပ်သွားကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးကို ထိမ်းသိန်းကာကွယ်နည်းရဲ့ အညံ့ဆုံးနည်းဟာ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲ ထည့်သွင်းမိတာဖြစ်တယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှု သူ့အလိုလိုမီးလောင်သွားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ အထောက်အထားပြောရရင် အဲလို ဘာသာအတူတူ ကိုးကွယ်သူတွေကနေပဲ သူတို့ကိုအကြာကြီးဖိနှိပ်ထားတဲ့အချက်ကို မြန်မာပြည်သူတွေကနေ မေးစပြုလာကြပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာမှာ ကြွယ်ဝပြီး မတူကွဲပြားမှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အသည်းနှလုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ မသိတာပဲဖြစ်မလား မပြောတတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့ မြင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အင်မတန်အလှတရားရှိတဲ့ ဘာသာတရားဖြစ်တယ်။ သက်ရှိသတ္တဝါတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ အကြင်နာတရားနဲ့ အဆုံးစွန်သောမေတ္တာတရားထားတဲ့ ဘာသာတခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခံစိတ်ကသာ အနိုင်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။
ပိုက်စံ နှင့် ပိုက်ဆံ ဘယ်ဟာအမှန်လည်း ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Indian paisa ကနေယူထားတာ။ ပိုက်ဆံလို့သာ အသံထွက်ကြ ရေးကြတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော် ခဏခဏမှားသုံးမိလို့ပါ။ ကျွန်တော်က စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့အတွေးနှင့် ပိုက်စံ ဆိုပြီးသုံးမိနေလို့။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
သူတို့က ပိုက်ဆားအသံမျိုးထွက်တယ်။ ပိုက်ဆေးလို့လည်းထွက်တယ်။ အဲတာက ဝါကျအလိုက်ပြောင်းတာ။ မြန်မာလို ပိုက်စံလည်း မှားမယ်။ ပိုက်ဆန်လည်း မှားမယ်။
နားရွက်ကိုရေးသလား စဉ်းစားမိတယ်။ ၂-၃ ခေါက် ထပ်ဖတ်ရတယ်။ အမာရွတ်လို့သာ ရေးပါတယ်။ အနာလို့ရေးရတယ်။ ပျောက်လို့ ရေးရပါတယ်။ သမီးကိုတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ အဆင့်နဲ့ရိုက်ထားတယ်။ တချို့က အလွယ်ရေးလို့မှားတာပါလို့ ဆင်ခြေပေးကြတဲ့အကြောင်း။
မြန်မာစာ အမာရွတ်တွေ ပျောက်ကင်းပါစေသတည်း။
1. Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/acne-scars.html
2. Chicken Pox Scars ရေကျောက်အမာရွတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/chicken-pox-scars.html
3. Keloid အရုပ်ဆိုးတဲ့ အမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/keloid.html
4. Scar (2) အမာရွတ် (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/scar-2_21.html
5. Scar (1) အမာရွတ် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-1.html
6. Scar (3) အမာရွတ် (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-2.html
ဆရာခင်ဗျား ဒါပေမယ့်လား၊ ဒါပေမဲ့လား မကွဲပြားလို့ပါ။
အရင်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ဒါပေမဲ့ရော ဒါပေမယ့်ပါ မပါ။ သို့သော်လည်း၊ ဒါဖြစ်သော်လည်းကို စကားအရသုံးတာ ဖြစ်ပါမယ်။
မဲ့ = မရှိ
မဲ့ပဲ = ကာကွယ်သည်
မယ့်လို့လည်း မရှိ။ မယ်၏ကို မယ့်လို့ရေးတယ်။ မယ်လို့တော့ရှိတယ်။ မယ်ညိုငှက်၊ မယ်ဒလင်၊ မယ်ဘွဲ့မောင်ဘွဲ့၊ မယ်နု၊ မယ်တော်၊ မယ်သီလရှင်၊ အမယ်မင်း၊ အမယ်အို၊ အမယ်ကြီး၊ မယ်မင်း၊ မယ်ခွေ၊ လူမမယ်၊ ဆန်တလမယ်၊ မယ်နဲ့မောင်။ အမျိုးသမီးကို မယ်လို့သုံးတယ်။ မယ်ဗမာ၊ မယ်စကြာဝဠာ၊ မယ့်တကိုယ်စသဖြင့်ရေးကြပါတယ်။
အဲတာကြောင့် ဒါပေမဲ့က ပိုသင့်မလား စဉ်းစားမိတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ Keratosis Pilaris အကြောင်း ရေးဖူးရင် ပြန် share ပေးလို့ ရမလား။ Peeling လုပ်ရင်ပျောက်လားရှင့်။ မူလတန်းလောက်ကတည်းက KP ရှိတာပါ။
မေးတဲ့သူ အသက်-ကျား-မ မသိပါ။ အရင်မေးတာတွေရှိလို့ ရေးထားပါတယ်။
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် မေးခွန်းလေးကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မ အသက် ၂၅ အပျိုပါရှင့်။ မျက်စိနားမှာ ငါးမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့ အဖုလေးတွေ ၃လုံးလောက် ပေါက်နေပါတယ် ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့လည်း အဲ့ဒါတွေက လိမ်းဆေးမရှိဘူး လေဆာနဲ့ပစ်မှ ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့် ပြီးတော့ အဲ့ဒီအလုံးတွေက ပွားတတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ မျက်လုံးနားဆိုတော့ လေဆာပစ်ရင် ထိခိုက်မိမှာ စိုးလို့ပါရှင့်။ လိမ်းဆေးရှိရင်လည်း ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။ အလုံးတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ပုံနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ ကျွန်မအသက်က ၂၇ ပါဆရာ။ ကျန်းမာရေးလဲကောင်းပါတယ်ဆရာ။ အိမ်ထောင်လဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၁၅ နစ်လောက်ကစပြီး မျက်လုံးအောက်မာ ဝက်ခြံလိုအဖုသေးသေးလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ ဝက်ခြံလိုလဲညှစ်လို့ မရပါဘူးဆရာ။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အဖုလေးတွေ ပိုပိုများလာလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးသုံးရမလဲ ညွှန်ပြပေးပါအုန်းဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၄။ ဆရာ သမီးမျက်မှာ နှာခေါင်းဘေး မျက်လုံးအောက်မှာ ဗျုတ်ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဖုလေးတွေ အများကြီးပါ။ မနက်အိပ်ယာနိုးချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ နေ့လည်ကစပြီး အရမ်း သိသာပါတယ်။ အဲဒီ အဖုလေးတွေကို ကုလို့ရနိုင်ပါလား။ တချို့က အဲဒါကို ဆားဝက်ခြံလို့ပြောပြီး၊ တချို့က အဆီဖုလို့ ပြောပါတယ်။ မျက်နှာအရေပြား ချောချင်ပါတယ်။ ကုလို့ရနိုင်ပါလားဆရာ။ ဖြေကြားပေးပါ။
၅။ ဆရာ ကျွန်တော့ မျက်နှာ ပါးနှစ်ဖက်မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။ ဝက်ခြံဆိုပေမဲ့ ရိုးရိုးဝက်ခြံလိုမျိုး ရောင်တာ မှဲ့တာ နာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံလို့ပဲ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ စမ်းကြည့်ရင် အစေ့လေးတွေလိုမျိုးပဲ။ မှဲ့ပြီးတော့လဲ ရောင်မလာဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ။ ညှစ်လိုက်မှ အဖြူအစံလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ မညှစ်ရင် ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ကျန်နေပါတယ်။ မျက်နှာကလဲ ကိုင်လိုက်ရင် အခဲလိုမျိုးကြီးပဲ။ ကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ရင် သေချာသစ်ပါတယ်။ လက်နဲ့လဲ မကိုင်ပါဘူး။ Cosmetic တွေသုံးပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲ့ဒါဘယ်လို ပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ အလိုမျိုး ဖြစ်တာရယ် ရိုးရိုးဝက်ခြံနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။
Seborrhoea (Seborrhea) အရေပြားမျာ အဆီများရာကနေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဖြစ်တယ်။ အများစဟြာ အခြခံရောဂါမရှိကြပါ။ ရှားရှားပါးပါး Parkinson's disease ဒါမှမဟုတ် Acromegaly ရောဂါရှိတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ Androgens ဟော်မုန်း များနေရင်လည်း ဖြစ်တယ်။ Congenital adrenal hyperplasia ဆိုတဲ့ မွေးရာပါရောဂါက အတော်ကိုရှားတယ်။ အရေပြားမှာ အနေရခက်လာမယ်။ ညစ်ပေလွယ်မယ်။ ဝက်ခြံကနေဖြစ်ဖြစ် Seborrhoeic dermatitis အဆီပြန်အရေပြားနာကနေဖြစ်ဖြစ်လည်း ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်ရဲ့ ၂၉ နှစ်ပတ်လည်နေ့ပို့စ်တွေ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော်လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ၂၄ နှစ်ကြာ အတူကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပလှုပ်ရှားမှုမှာ သူတို့က တနှစ်စောဖွဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က ၂ဝ၁၄ မှာ ပြည်ပစာရင်းကနေ တတိယနိုင်ငံစာရင်းထဲရောက်သွားပြီး၊ သူတို့က ပြည်တွင်းပြန်ရောက်ကြတယ်။
နိုဝင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့ဆိုရင် ကျွန်တော့်မှာ မမေ့စရာတခုရှိပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့မှာ ဆေးကျောင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဝင်စရက် အေးမြမြရှိတယ်။ ကြည့်လေရာရာ မြူမှုံနဲ့ ခပ်ဝါးဝါးရှိတယ်။ မန္တလေးဘူတာကြီးကလာတဲ့ ကျောက်မီးသွေး မီးခိုးနံ့က ရနေသေးတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းသစ်တွေ တွေ့ရတယ်။ သူတို့အားလုံးနဲ့ သိရခင်ရတာ (၄၈) နှစ်ပတ်လည်နေ့လို့ ပြောနိုင်ပြီ။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ အဲဒီဝါကျကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ယူရမလဲဆရာ။ ဆရာအချိန်ရရင် ဖြေခဲ့ပေးပါဦး။
မိဘအိမ်ရာကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်ပယ်ခဲ့ပါဘူး။
ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ မှားနေတယ်ထင်ပါတယ်။ စာရေးတဲ့သူက ဘယ်လိုဆိုလိုသလဲတော့ စဉ်းစားနေရတယ်။ ကတ္တား ခေါ် ပြုလုပ်သူက ကျွန်တော်လား။ မိဘအိမ်ရာလား။
ကျွန်တော့်က မိဘအိမ်ရာကနေတော့ ဘယ်တော့မှ မစွန့်ခွါခဲ့ပါဆိုတာက တမျိုးဖြစ်တယ်။ ထွက်ခွါရာပုဒ်။
ကျွန်တော့်က မိဘအိမ်ရာကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်ပယ်ခဲ့ပါဆိုတာက တမျိုးဖြစ်တယ်။ ကံ။
ကြိယာဖြစ်တဲ့ မစွန့်ပယ်နဲ့ စွန့်ခွါတာ မတူပါ။ စွန့်ပယ်ဆိုတာ မသုံးတော့တာ။ စွန့်ခွါဆိုတာက နေရပ်ကနေ မနေလိုတော့လို့ နေမရတော့လို့ ထွက်ခွါတာ။
တံမြက်စည်းလှည်းတဲ့ပညာကို ငယ်လေးကတည်းက ပညာယူခဲ့ရပါတယ်။ အဖေကသင်ပေးတယ်။ ဦးကြီးဦးလေးတွေက သင်ပေးတယ်။ ဇာတိမင်းရွာမှာက အုန်းပင်ပေါလို့ အုန်းတံမြက်စည်းထွက်တယ်။ ငါးနှစ်သားကတည်းက မိသားတစုလုံး မုံရွာကိုပြောင်းနေတော့လည်း လူကြုံလာတိုင်းပါလာကြလို့ အုန်းတံမြက်စည်းဟာ အိမ်မှာပြတ်လပ်နေတယ်လို့ မရှိပါ။
အဲလိုတံမြက်စည်းမျိုးကို တသက်လုံးသုံးခဲ့ရပြီး မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်နေရတဲ့နောက် ဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရောက် ပြန်မတွေ့တော့ပါ။ နောက်ပေါ်တံမြက်လှည်းစရာတွေကို ငယ်တုံးကသုံးတဲ့ အုန်းတံမြက်စည်းလောက် မကြိုက်ပါ။
တံမြက်စည်းအသစ်မှာ အုန်းလက်တံလေးတွေက ဖြောင့်စင်းနေတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ တဖက်သပ်ယိုင်စောင်းလာတယ်။ အစောင်းနှစ်ဖက်ကို အမှိုက်ကိုလှည်းတဲ့အခါ အသုံးပြုရတာ မတူပါ။ အကြိုအကြားကအမှိုက်ကို ချူယူတဲ့အခါ အချွန်ပိုင်းလေးနဲ့ယူမှရတယ်။ တံမြက်စည်းကို ပက်လက်ထားပြီး အမှိုက်လှည်းမိရင် အဆူခံရတယ်။ အမှိုက်ပါမလာပဲ ဖုန်ပဲထတယ်။ အမှိုက်မလှည်းခင် ရေလေးနည်းနည်းဖြန်းနိုင်ရင် ဖုန်မထပါ။
အမှိုက်ကို ဘယ်နေရာမှစုထားမလဲ။ အလှမ်းကျယ်ရာမှာ အမှိုက်လှည်းရရင် ဟိုနေရာမှာတပုံ၊ သည်နေရာမှာတပုံ လုပ်ရတယ်။ အမှိုက်ကို မြေနိမ့်ရာမှာပုံမှသာ ကြာတော့ မြေသားပါညီလာတယ်။ အိမ်ပြင်ကအမှိုက် အိမ်ထဲမသွင်းရ ဆိုတဲ့ဥပဒေသက မြန်မာစကားပုံထဲမှာတောင်ပါသေးတာ။
မြန်မာပြည်မှာ အမှိုက်လှည်းတာ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့လမ်းကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ခေတ်ရှိခဲ့တယ်။ လမ်းထဲက စေတနာထားသူ တယောက်က တလမ်းလုံး နေ့တဓူဝလှည်းရှင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ အလိုက်သိတဲ့ အိမ်နီးခြင်းတွေက လှည်းပုံထားပြီးသား အမှိုက်ကို လာကြုံးပေးကြတယ်။ အဲတာလည်း ပညာပါသေးတယ်။ မြေကြီးတွေ ကျန်နေစေရမယ်။ မဟုတ်ရင် လမ်းခွက်ဝင်ပြီး မိုးရွာရင်ရေဝပ်မယ်။ လက်ခတ်လို့ခေါ်တဲ့ သစ်သားပြား နှစ်ချပ်ကို တဖက်ကအဖြောင့် တဖက်ကိုခုံးခုံးလေးလုပ်ထားတာနဲ့ အမှိုက်ကြုံးရတယ်။
အဲဒီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းယဉ်ကျေးမှုက အိန္ဒိယရောက်တော့ ပြဿနာတက်ပါရော။ သူတို့ဆီမှာ အမှိုက်လှည်းတာကို အိမ်စေတွေ၊ ဇာတ်နိမ့်သူတွေကသာလုပ်တော့ ဗမာတယောက် စေတနာပေါက်လို့ အိမ်ရှေ့မှာ အမှိုက်လှည်းတာကို ဆိုရှယ်ဝပ်လို့ မသတ်မှတ်ပါ။ တော်ကြာဘေးအိမ်တွေက သူတို့အိမ်ရှေ့မှာပါ လာလှည်းလို့ခိုင်းမယ်ဆိုပြီး အရင်ရောက်နှင့်သူတွေကသတိပေးမှ တံမြက်လှည်းအမှိုက်သိမ်းအတတ်ကို ရှင်ခန်းဖြတ်လိုက်ရတော့တယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ တန်ဘိုးထားမှုတွေ ယိုယွင်းကျဆင်းလာနေတာ မမြင်ရလို့ မျက်စေ့အောက်လို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် အတတ်သိနေရတယ်။ အဲလိုအစဉ်အလာကောင်းခဲ့တဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းယဉ်ကျေးမှုကို အသိရှိသူတွေက အညစ်အပေခံ၊ အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တွေကို ရင်ဆိုင်ပြီးလုပ်နေကြတာ မကြာလှသေးပါ။ ပျက်ခဲ့တာက ရာစုနှစ်တဝက်လောက်ရှိခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော်ပိုင်တယ်ထင်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ သတ်ပုံအမှားတွေကို တံမြက်စည်းလှည်းနေရပါတယ်။
သတ်ပုံတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်တာက အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေရလို့ပါလို့ ပြောကြတယ်။
အလွယ်ရေးရလို့ပါလို့ ဆင်ခြေပေးတယ်။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ သူတို့ရေးတာက ပိုတောင်ခက်အောင်ရေးရတာတွေ။
တစ်ခါတစ်ရံတဲ့။ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံတဲ့။ ဘယ်ကလာ ဟုတ်ရမှာလဲ။ ရေးတော့ တလွဲ၊ ဖတ်တော့အမှား။
ခေတ်တဲ့ လာသေးတယ်။ ပြောကျိတဲ့။ တိဘူးတဲ့။ ရှယ်ပြဇေတဲ့။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ စကားမပီတာကို မပီတဲ့အတိုင်းရေးတာ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်လာခြင်းသည် မြန်မာပြည် မပီတာတွေကို လူတကာသိအောင် အထုပ်ဖြေပြရာရောက်စေသည်။
ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ တက္ကသိုလ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံလေး တယောက်ကတင်ထားတာ အခုပဲတွေ့တယ်။ တကယ့်ဆိုတဲ့သတ်ပုံကို ထောက်ပြစရာရတယ်။ ကျေးဇူး။ ဂူဂယ်မှာ တစ်ကယ်တွေလိုက်ရှာတယ်။ ခဏလေးနဲ့ ၁၈ ခုတွေ့တယ်။ ရှာလေတွေ့လေ ရှိဦးတယ်။ သတ်ပုံမှားရေးကြသူတွေထဲမှာ လန်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေ၊ နည်းပညာသင်ပေးနေသူတွေအပြင် တရားဓမ္မရေးနေသူတွေလည်းပါတယ်။
1. ဟာ တစ်ကယ့် လန်းတယ်ကွာ |
2. အောင်မွင်မှရြဲ့ တစ်ကယ့် လျြိ့ဝှက်ချက် -
3. ပုံစံတူ DB5 ရေဋ္ဋရည်စိမ်ကားဟာ တစ်ကယ့် DB5 ကားကို ပုံတူအချြိးကျ စကေး 1:3 ဖြင့် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပွီး တစ်ကယ့် ...
4. အောင်မွင်မှရြဲ့ တစ်ကယ့်. သုတဇုန်. အောင်မွင်မှရြဲ့ တစ်ကယ့်
5. အခုတွော့ကည့်သူ့လုပ်ပုံက တစ်ကယ့် ...
6. ပြန်စမ်းကွည့်တော့ အဆင်ပြေသွားပွီ။ display နဲ့ တစ်ကယ့် အထွက် current အတော်လေး နီးနီးစပ်စပ်ရပါတယ်။
7. Application ကို ဖန်တီးပွီးနောက် တစ်ကယ့် (Device) တွင် Install လုပ်ပွီး စမ်းသပ်ရန် ...
8. အားလုံး စိတ်ကွိက်ြဖြစ်ပြီဆိုရင် Apply To Blog ဆိုတာလေးကို နိပ်လိုက်ပြီး ရင်တော့ တစ်ကယ့် ...
9. တစ်ကယ့် စက်တစ်လုံးကတော့ သွားမမှန်းလိုက်နဲ့ ဒီမှာ အောက်ဆုံးက စရေရင် ဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့ ...
10. ဒါမှ တစ်ကယ့် ဥပေက်ခာ။ဆဲလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး၊လုပ်သင့်တာ လုပ်မယ်၊ချီးမွမ်းရင်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူး ..
11. စိတ်ဓာတ်ကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားတယ်၊ ဒါမှ တစ်ကယ့် ဥပေက်ခာ ပါ။
12. တစ်ယောက်အပြန် အလှန်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ ဒီသက္စွန်မှာ အရင်တုန်းကနဲ့ မတူတဲ့အလှအပတွေမက တစ်ကယ့် သဘာဝ၊
13. ကွန်ြတော်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်င်္မီ ဆိုတာက တစ်ကယ့် ကွန်ြတော်တို့ ဉိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့
14. တစ်ကယ်တော့ ဆင်ကွီးမဟုတ်ပါဘူး၊ နံရံ ဆိုတာကလည်း တစ်ကယ့် နံရံ ပါပဲ၊ တိုင် ဆိုတာကလည်း တစ်ကယ့် တိုင်ပါပဲ၊
15. သေပွဲဝင်ရရှာတာများ မြင်မကောင်းလိုက်တာဗျာ…. တစ်ကယ့် ငရဲတစ်ခုကိုရောက်နေ ရသလိုပါပဲ
16. တစ်ကယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ အမျြိးသမီးတွေဟာ အရပ်ပုတဲ့အမျြိးသားတွေကို သဘောကျလေ့မရှိကွပါဘူး။
17. အကယ်၍ ပါဏာတိပါတာ ဝေယာမဏိ သိက္ခာပဒံ သမ္မာဒိယာမိ ဆိုတာကို သူ့ အသက်အား သတ်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်တာဟာ တစ်ကယ့် ...
18. ဒါတွေ run ကွည့်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ တစ်ကယ့် server ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် များမယ်၊ အင်တာနက်ပျေါကနေ လုပ်ရမှာ ...
Photo from Thein Htun
အားလုံးသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက် - Autoimmune ရောဂါမျိုးကွဲ ၈၀ လောက်ထဲက ကုဖို့ခက်ပြီး US နဲ့ Germany မှာတောင် cause ရှာနေဆဲ ၃ ခုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါဝေဒနာကို ကျမခံစားနေရပါတယ်။ allergic reactions တွေက ၂ ရက် တခေါက်လောက်ဖြစ်နေပြီး၊ ဆရာဝန်တွေဆီသွားရင်တောင် ရောဂါအမည်မကြားဘူးလို့ ပြန်ရှင်းပြနေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ကျမကို steroids ထိုးပေးပါ၊ anti histamines ဆေး on ပေးပါလို့ ပြန်ပြောနေရပါတယ့့်
အခုပဲတွေ့တဲ့ ပို့စ်တခုပါ။ ကျွန်တော့်ကို မေးတာမဟုတ်ပါ။ ရေးထားတာလေး ထပ်တင်ပါရစေ။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်သာမရှိရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမျိုးမေးတယ်။ ဖြေသူတွေဖြေကြတာတွေကလည်း မှားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ တပ်မထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ်လို့လည်း ပြန်ရေးတယ်။ ပြန်ရေးတဲ့သူပြောတာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ ပွင့်မှာက မီးသာမဟုတ်ဘူး။ ဒါမျိုးတွေရေးနေကြတာ မကောင်းပါ။ နေရာတကာဆရာလုပ်ပြီး မင်္ဂလာယူတာမဟုတ်ပါ။
ဘာလို့ အဲလိုတွေရေးလာအောင် ဖြစ်နေသလည်းက အရေးကြီးတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတာ ရောဂါရှာတာ အရင်လုပ်ရလို့ပါ။ တိုင်းပြည်ရောဂါကို ဆရာဝန်မပြောလည်း လူတွေကသိကြပါတယ်။ အာလ်ထွာဆောင်း မလိုတော့ပါ။
တိတိကျကျပြောရရင် မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးရောဂါကို Autoimmune Diseases အော်တိုအင်မြူးရောဂါလို့ ခေါ်သင့်တယ်။ ခုခံအားစနစ်ကမောက်မ ဖြစ်ရာကနေ ကိုယ့်ဟာကို ရန်သူသတ်မှတ်ပြီး ချေမှုန်းဖျက်ဆီးနေတဲ့ရောဂါတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ အကုရခက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အရာကို ရန်သူလိုသဘောထားပြီး ခုခံတိုက်ထုတ်နေတဲ့ရောဂါကို အဲလိုခေါ်ပါတယ်။
American Autoimmune Related Diseases Asတွေ sociation (AARDA) စာရင်းထဲမှာ အော်တိုအင်မြူးရောဂါစုစုပေါင်း (၁၅၉) မျိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းသား တတိယအင်ဘီမှာ သင်ရကတည်းက ခေါင်းရှုပ်ရတဲ့ရောဂါအစုအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။
18. Autoimmune oophoritis
19. Autoimmune pancreatitis
20. Autoimmune retinopathy
21. Autoimmune thrombocytopenic purpura (ATP)
22. Autoimmune thyroid disease
23. Autoimmune urticaria
24. Axonal & neuronal neuropathies
25. Balo disease
26. Behcet’s disease
27. Bullous pemphigoid
29. Castleman disease
30. Celiac disease
31. Chagas disease
32. Chronic fatigue syndrome
33. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)
34. Chronic recurrent multifocal ostomyelitis (CRMO)
35. Churg-Strauss syndrome
36. Cicatricial pemphigoid/benign mucosal pemphigoid
38. Cogans syndrome
39. Cold agglutinin disease
40. Congenital heart block
41. Coxsackie myocarditis
42. CREST disease
43. Essential mixed cryoglobulinemia
44. Demyelinating neuropathies
45. Dermatitis herpetiformis
47. Devic’s disease (neuromyelitis optica)
48. Discoid lupus
49. Dressler’s syndrome
51. Eosinophilic esophagitis
52. Eosinophilic fasciitis
54. Experimental allergic encephalomyelitis
55. Evans syndrome
57. Fibrosing alveolitis
58. Giant cell arteritis (temporal arteritis)
59. Giant cell myocarditis
61. Goodpasture’s syndrome
62. Granulomatosis with Polyangiitis (GPA) (formerly called Wegener’s Granulomatosis)
63. Graves’ disease
64. Guillain-Barre syndrome
65. Hashimoto’s encephalitis
66. Hashimoto’s thyroiditis
67. Hemolytic anemia
68. Henoch-Schonlein purpura
69. Herpes gestationis
71. Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
72. IgA nephropathy
73. IgG4-related sclerosing disease
74. Immunoregulatory lipoproteins
75. Inclusion body myositis
78. Juvenile diabetes (Type 1 diabetes)
79. Juvenile myositis
80. Kawasaki syndrome
81. Lambert-Eaton syndrome
82. Leukocytoclastic vasculitis
84. Lichen sclerosus
85. Ligneous conjunctivitis
86. Linear IgA disease (LAD)
87. Lupus (SLE)
88. Lyme disease, chronic
89. Meniere’s disease
90. Microscopic polyangiitis
91. Mixed connective tissue disease (MCTD)
92. Mooren’s ulcer
93. Mucha-Habermann disease
95. Myasthenia gravis
98. Neuromyelitis optica (Devic’s)
100. Ocular cicatricial pemphigoid
101. Optic neuritis
102. Palindromic rheumatism
103. PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcus)
104. Paraneoplastic cerebellar degeneration
105. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
107. Parsonnage-Turner syndrome
108. Pars planitis (peripheral uveitis)
110. Peripheral neuropathy
111. Perivenous encephalomyelitis
112. Pernicious anemia
113. POEMS syndrome
114. Polyarteritis nodosa
115. Type I, II, & III autoimmune polyglandular syndromes
116. Polymyalgia rheumatica
118. Postmyocardial infarction syndrome
119. Postpericardiotomy syndrome
120. Progesterone dermatitis
122. Primary sclerosing cholangitis
124. Psoriatic arthritis
125. Idiopathic pulmonary fibrosis
126. Pyoderma gangrenosum
127. Pure red cell aplasia
128. Raynauds phenomenon
129. Reactive Arthritis
130. Reflex sympathetic dystrophy
131. Reiter’s syndrome
132. Relapsing polychondritis
133. Restless legs syndrome
134. Retroperitoneal fibrosis
136. Rheumatoid arthritis
138. Schmidt syndrome
141. Sjogren’s syndrome
142. Sperm & testicular autoimmunity
143. Stiff person syndrome
144. Subacute bacterial endocarditis (SBE)
145. Susac’s syndrome
146. Sympathetic ophthalmia
147. Takayasu’s arteritis
148. Temporal arteritis/Giant cell arteritis
149. Thrombocytopenic purpura (TTP)
150. Tolosa-Hunt syndrome
151. Transverse myelitis
152. Type 1 diabetes
153. Ulcerative colitis
154. Undifferentiated connective tissue disease (UCTD)
157. Vesiculobullous dermatosis
159. Wegener’s granulomatosis (now termed Granulomatosis with Polyangiitis (GPA)
တိုင်းပြည်တခုဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲ။ အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတိုင်က အသက်ရှင်ရပ်တည်နေဘို့ အသုံးကျတယ်။ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းက အရေးပါတယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ချစ်တတ်ရတယ်။
Autoimmune Diseases အော်တိုအင်မြူးရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/autoimmune-diseases.html
အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့မှာရှိတဲ့ မွန်ဘုန်းကြီးကျောင်း ကထိန်ပွဲမှာ စားလည်းစား စကားလည်းပြော တရားဟောတာလည်းနာ အမျှအတန်းလည်း ဝေခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာနေခဲ့စဉ်က နိုင်ငံရေးစကားတွေသာ ပြောခဲ့ရတာ။ အဲဒီကထွက်တာ နိုင်ငံရေးကိုရင်လူထွက်လိုပဲ။ စကားတွေ ပြောင်းပြောလို့ရပြီ။ ဘာသာရေး ထည့်ပြောနိုင်ပြီ။ လူမှုရေးစာတွေ၊ ပညာသုတစာတွေ ရေးနိုင်ပြီ။ ကျန်းမာရေး ဖြေနိုင်ပြီ။ မိန့်ခွန်းမပြောရတဲ့၊ စတိတ်မင့်မထုတ်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်ပြီ။
Photo by Aung Sein Win
၁။ သိတ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာ စသဖြင့်ရေးတဲ့စာတခုတွေ့တယ်။ သိပ်ကိုလို့သာ ရေးသင့်တယ်။ သိတ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိသလောက် မြန်မာစာမှာမရှိပါ။
၂။ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ကျမတို့က သိတ်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါ။
၃။ သိပ် နဲ့ သိတ် ဘယ်ဟာ အမှန်။
ငပိသိပ်၊ ငချဉ်သိပ်၊ (ရှမ်းတွေက ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာ ငချဉ်သိပ်ကြတယ်။)
ဝတ်မှုန်လား ဝတ်မှုံလား ဆရာဆွေဗျား
လက်ဝတ်တန်းဆာ = လက်စွပ်
ဝတ်တရား = ဝတ္တရား
ဝတ်ပန်း = ဆူးပန်းပင်
ဝတ်ရည် = ပန်းဝတ်ရည်
၁။ အဲ့ဒါဆို ဆြာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ သုံးလို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးလားဆရာ။ ရှင်းပြပေးပါ။
၂။ မိုးကို ကျမ်းတစ်ခုမှာ မိုဃ်းလို့ရေးတာ တွေ့ဖူးတယ်ဆရာ။
အရင်ကလည်း ဖြတ်လမ်းရေးနည်းတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သောံ (ကသတ်အစား)၊ မောံ (ကသတ်အစား)။ ဆြာမှာ ရရစ်က ရကောက်အစား သုံးတယ်။
စာနဲ့စကား ပြောင်းလဲတာတွေက ခေတ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။ ၍့၊ ၏့၊ ကျမ္မာ၊ စွဲး၊ စဲး၊ ဆုမ္မ၊ ထဲး၊ ဆြာ၊ မင်းသ္မီး၊ သ္မီး၊ မိမ္မ၊ မိုဃ်း၊ မဲးဇာ၊ မှု့၊ ယ္ခင်၊ ယ္ခု၊ မြမ္မာ၊ သ္ခင်၊ သဲး၊ ဥူး၊ ဧး၊ စတာတွေကိုလည်း အခု မရေးကြတော့ပါ။
လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီး ဦးမြတ်စံရေးတဲ့ မဲဇာတောင်ခြေရတုမှာ မဲးဇာတောင်ခြေ၊ သဲးသာသောင်မြေ၊ ပွဲးခါညောင်ရေ၊ စသဖြင့်ရေးခဲ့တယ်။ အခုတော့ မဲးဇာ၊ သဲးသာ၊ ပွဲးခါလို့ မရေးကြတော့ပါ။
အဆင့်တွေပါလေ့ရှိတဲ့ ပါဠိစာနဲ့ မြန်မာစာရောနေတာများခဲ့တယ်။ အဲတာတွေကို မဆင့်တော့ပဲ ခွဲရေးတာဟာ ရှင်းလင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်လည်းမပျက်စေလို့ သင့်မှန်တယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလိတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အစ္စရေး။ အဲတာတွေကို အဆင့်မပါဘဲရေးလည်း သတ်ပုံပျက်စရာမရှိပါ။
ပိုပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် ပါဠိတွေ၊ သက္ကတတွေ၊ ထပ်ဆင့်တွေနည်းလာတာက သင့်မြတ်တယ်။ စွယ်စုံကျမ်းထဲပါ စာလုံးတချို့ကို ပြောင်းရေးလာကြတယ်။ ကွန်မျူနစ် = ကွန်မြူနစ်၊ ဂျူးလယပ်ဆီဇာ = ဂျူလီယက်ဆီဇာ၊ ဆအူးဒီအာရေဗျ = ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ဆိုက်ဗီးရီးယား = ဆိုက်ဗေးရီးယား၊ ဗဲလဂျီယမ် = ဗယ်လဂျီယန်၊ ယန်ဆီမြစ် = ယန်စီမြစ်၊ ရှီကာဂိုး = ချီကာဂို၊ ရှီကာဂို၊ ဣသရေလ = အစ္စရေး။ အဲတာမျိုးက ကောင်းတယ်။
ထပ်ဆင့်တိုင်းကို လိုက်ပြောင်းတာတော့ မသင့်ပါ။ မန္တလေး၊ မိတ္ထိလာ၊ သလ္လာဝတီ၊ မုတ္တမ စတာတွေကို သည်အတိုင်းသာ ထားသင့်တယ်။
လွယ်တာကို ခက်အောင်ရေးခိုင်းထားတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ တခါတလေကို တစ်ခါတစ်လေ၊ သမတကို သမ္မတ။ မှန်တာကို မှားအောင်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နဲ့ သံရိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ ခက်သည်ကို လွယ်စေလော့၊ မှန်တာကို မမှားစေနဲ့။ သတ်ပုံအမှား ရောင်းမစားနဲ့။
ဆိုစကားတခုရှိတယ်။ ညံ့ဖျင်းခြင်းဟာ အဆိုးဆုံးမရောက်မချင်း ကောင်းမလာဘူးတဲ့။ မိုးခါးရေသောက်တဲ့သူတွေ များသေးတယ်။ အခုချိန်ဟာ အဆိုးဆုံးသာ ဖြစ်ပါစေတော့။
တချို့က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ (ဟထို) ကို အလွယ်ရေးမိတတ်ကြတယ်။ (ဟထိုး) ဟာ ဗျည်းစာလုံးတွေရဲ့ အလယ်ကနေ အောက်ကိုဆွဲရမယ်။ အဆုံးကနေဆက်ပြီး အောက်ကိုမဆွဲရပါ။ င ကို အဆုံးကနေအောက်ဆွဲလိုက်ရင် ဌ ဖြစ်သွားမယ်။ ငှ လို့ရေးမှသာ မှန်တယ်။
ငှ = ဝေငှသည်။ လောက်ငှသည်။ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ။ ကြငှန်း (အထွတ်အမြတ်)။ သုံးလူ့ကြငှန်း။
ဌ = ပဌမ (ပထမ)။ ဌပနာသည်။ ဌပနာတိုက်။ ဥက္ကဌ။
(ပါ) ဌပန = ထားခြင်း။ ယခုရေး = ဌာပနာတိုက်။
ပဌမ = ပါဠိ။
ပထမ = သင်္သကကြိုက် (သင်္သကရိုက်၊ သက္ကတ၊ ဆန်းစ်ကရစ်)
ဌာ = ဌာပနာတိုက်။ ကျန်းမာရေးဌာန။ ရာထူးဌာနန္တရ။ နေရာဌာန။
ဋ္ဌ = ဆဋ္ဌမ။ အဋ္ဌမ။ ဒိဋ္ဌမျက်မြင်။ ကုဋ္ဌနူနာ။ အဋ္ဌကထာ။ ပြဋ္ဌာန်း။ အဋ္ဌာရသပညာ။
ဥာတိမိတ်ဆွေတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အမျှရ၍ ကျန်းမာကြပါစေ။
ကျေးဇူးပြု၍ သတ်ပုံအမှန်ပြင်ပေးပါဦးဆရာ။ ဘုံကထိန်ပွဲ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲဆင်နွှဲနေစဉ် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသောကြောင့် ကထိန်ပွဲလာသူများမှာ နီးရာတည်းခိုဆောင်သို့သွားရောက်ပြီး ကြပ်ကြပ်သည်းသည်း တည်းခိုခဲ့ကြရသည်ဆရာ။
ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲက မှန်ပါတယ်။ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းလို့ရေးမှသာ မှန်မယ်။
တည်းဖြဋ် = တည်းဖြတ်
• မင်္ဂလာပါဆရာ သိချင်တာလေးမေးလိုရမလား ကျမ ကလေးမွေးထားတာ ၁ နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆရာ ရာသီအခုထိ မလာသေးဘူးဆရာ ကျမ ဆေးထိုးပါတယ် သုံးလခံဆေးပါ ရာသီမလာလို့ ဆေးပြန်စားနေပါတယ် အခု ဆေးကန့် တကန့် ကုန်သွားပါပြီ ရာသီအခုထိ မလာသေးပါဘူးဆရာ ဒါကို ဘယ်လို့လုတ်ရမလဲဆရာ နောက်ထပ်ကလေး မလို့ချင်သေးဘူးဆရာ သမီးက အခုနေတာ့့ မှာဖြစ်နေလို့ပါ သမီးက်ိုပြောပြပေးပါဆရာ
• Depo Provera သုံးလခံ ကိုယ်ဝန်တားထိုးဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/depo-provera.html ပို့လိုက်ပါတယ်။
ပဌမမေးခွန်းမှာ ဆေးကန့် တကန့်လို့ရေးတာကို ပြင်မပေးခဲ့ပါ။ စာပြန်လာမှ ရေးရတော့မယ်။ ဆေးကလို့ရေးရတယ်။ ဟုတ်ကဲလို့ ရေးသင့်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ ရေးရတယ်။
ဆေးကတ်၊ ကတ်ပြားလို့ အရေးများတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကနေယူတာဖြစ်လို့ သတ်ပုံမူသေထားဖို့ ခက်တယ်။ ကပ်ဆိုရင် စေးကပ်တာနဲ့ရောမယ်။ ဂတ်ပြားလို့ရေးတာကို မှားတယ်ပြောဖို့ ခက်ပြန်ရော။ အစောင့်ကို ဂတ်၊ ရဲစခန်းကို ဂတ်တဲ့လို့ သုံးတယ်။ ကဒ်ရေးတာက ပိုတိကျတယ်။ ဒ်ကို မသင့်ဘူးငြင်းရင်လည်းရတယ်။ ကတ်ကို အိမ်မိုးဝါးကတ်၊ မီးနေကတ်၊ သူနာတင်ကတ်၊ လူသေတင်ကတ်လို့ရေးခဲ့တယ်။ ပြားချပ်တဲ့သဘောဖြစ်လို့ ကတ်ပြားက သင့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကတရီးပန်း (ဝါခေါင်လတွင်ပွင့်သော ခတ္တာပန်းတမျိုး)
ကတ္တိကာ = ကြတ္တိကာ
ကတ္တူ = လှေ
သဇင်တွေ မောင်ပွေ့လာခဲ့ပြီလို့ နာမည်ကြီးခေတ်ဟောင်းသီချင်တပုဒ်မှာပါတယ်။ အဲဒီခေတ်လောက်က ဝတ္ထုတပုဒ်မှာ ခင်နဲ့မောင် စထော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့တယ်လို့ ရေးတယ်။ နောက်တပုဒ်မှာ ဇာတ်လိုက်သည် ဂျစ်ကားတံခါးကိုဖွင့်၍ဆင်းလိုက်သည်တဲ့။ အဲဒီခေတ်က ဂျစ်ကားတွေမှာ တံခါးမပါ။
သဇင်ပန်းဆိုတာ အခက်သေးသေးလေးတွေ၊ တန်ဖိုးကလည်းကြီးတယ်။ တပွေ့တပိုက်တော့ များပါ့လားစဉ်းစားမိတယ်။ ချမ်းသာတဲ့မောင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စထော်ဘယ်ရီပင်ဆိုတာကလည်း ခြုံပုတ်မျိုး နိမ့်တယ်။ အောက်မှာ လူမဝင်လောက်ပါ။
ကျွန်တော်က စာဖတ်ရင်၊ ကဗျာဖတ်ရင်၊ သီချင်းနားထောင်ရင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ဖြစ်နိုင်သလားကို စဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။ ငယ်စဉ်ကတော့ စာလုံးလှလှလေးတွေ၊ ကာရန်မိတာလေးတွေ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကောင်းတာတွေနောက်မှာ မျောပါခဲ့တာ အမှန်ပါ။ နှစ်တွေက မနည်းပါ။ နောက်တော့ သမိုင်းနောက်ခံတွေရေးဖွဲ့တာတွေကိုပါ တကယ့်ရာဇဝင်နဲ့ တွဲကြည့်ချင်လာတယ်။
မှတ်ချက် - ရင်ထဲရှိ ရှိသမျှ ပြောပြရရင် တစ်ကယ်လှတယ် မဟုတ်ပါ။ မြန်မာစာ အလှမပျက်အောင် ဆုတောင်းတယ် သင်းပျံ့ကာ အမြဲမွှေးစေချင်တယ်။
• Saya နှာခေါင်းနဲ့ပါးမှာ ဝက်ခြံလိုအဖြူဖုလေးတွေ ညှစ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆရာ။ ဘာဆေးသောက်ရင်ပျောက်လဲမသိဘူးဆရာ။
• ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ မေးနည်းစည်းကမ်းပို့လိုက်။
• အသက်က ၁၆။ ၁၄ နှစ်လောက်ကဖြစ်တာပါဆရာ။ တခါမှဆရာဝန်နဲ့မပြဘူးပါ။
• ဝက်ခြံစာတပုဒ် မနေ့လောက်ကတင်ထားတယ်။ ဝက်ခြံစာ ၄-၅-၆ ပုဒ် ဘလော့မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ဖြစ်စေတာ မတူကြပါ။ ကုသနည်းလည်း မတူပါ။
• ဒါမျိုးပါဆရာ။ ဘာဆေးသုံးရမလဲသိချင်လို့ပါ။ ပြောပြပါဦးဆရာ။
• ကြော်ငြာပုံ သူများပုံတွေနဲ့မေးတာကို ဘယ်သူကမေးမေး မဖြေပါ။ ပုံတင်တဲ့ဆီသာ မေးပါရန်။
• ဆရာ ဘာလိမ်းရင်ပျောက်မလဲမသိဘူး။ Skineal တွေလူးမိလို့လားမသိဘူးဆရာ။
• အသက် ၁၆ ခွဲပါဆရာ။ အမျိုးသမီးပါ။ ရာသီကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ ဖြစ်တာကဝက်ခြံကို ဆေးတွေ လျှောက်လူးမိတာပါ။ ပြုံထွက်လာတာ ၆ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ ဝက်ခြံလား infection ဝင်တာမျိုးလားလည်း မသိပါဘုးဆရာ။ အဲဒီဆေး ရောလူးလို့ရလားဆရာ။
• သည်အတိုင်းထားတာပိုသင့်။ အရေပြားသန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်လိုအပ်။ အဆန်းတွေ ဆေးတွေ မသင့်လောက်။ ဟော်မုန်းအရဖြစ်။ ဟော်မုန်းပုံမှန်လာရင် ကောင်းလာနိုင်။ ဝက်ခြံစာတွေ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ ဆိုတာရယူပါလေ။
• ဆရာ ချွေးပေါက်တွေပိတ်နေတာဘာလူးလို့ရလဲ ချွေးပေါက်ပွင့်အောင်
၁၅-၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးလေးတယောက်၊ နာမည်တွေဘာတွေထားပါ။ Skin lotion နာမည်ကြီးလို့ ဝယ်လိမ်းတယ်။ ချွေးထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ကုန်ပြီး ဝက်ခြံတွေ ဗုံးပေါလအောထွက်လာပါလေရော။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် နည်းနာတွေ ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ ကျော်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ကဆယ်ကျော်သက်၊ မျက်နှာကအရေပြား၊ အမျိုးအစားသိပါသလား။ လေးမျိုး လေးစားမှတ်ထားပါ။ (၁) ခပ်ခြောက်ခြောက်၊ (၂) အဆီပြန်၊ (၃) ပုံမှန် နဲ့ (၄) အဲဒါတွေ ရောထွေးနေတာ။
ညီညာ ချောမွေ့နေတယ်။ ပျော့ညက်တယ်။ အစက်အပျောက် ကင်းစင်တယ်။ ဘာမှ ကွာကျနေတာလဲ မရှိဘူး။ မွေးညင်းပေါက်လေးတွေကလဲ မြင်ရုံသာမြင်ရတယ်၊ ကျယ်မနေကြဘူး။ ခြောက်လဲမနေ အစိုလဲမပြန်တာကို ပုံမှန်လို့ ခေါ်တယ်။ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောစရာလေးတွေ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် တနေ့မှာ မျက်နှာ ၂-၃ ခါသစ်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာရိုးရိုး၊ ဆပ်ပြာရည် မပြင်းတာကိုသာ သုံးပါ။ မွှေးလွန်းတာ ကောင်းလွန်းတယ်ဆိုတာ မသင့်ပါ။ ချွေးနဲ့ အညစ်အကြေး သန့်သွားဘို့သာ လိုတယ်။ အပိုမလိုပါ။
မျက်နှာအရေပြားမှာ ဘာမှန်းမသိနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဝက်ခြံလည်းမဟုတ်၊ အသက်ရလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ မှည့်ခြောက်လည်းမဟုတ်။ အနာလိုလို ဘာလိုလိုဖြစ်တတ်တယ်။ အရေပြားမှာ အဲလိုအပြောင်းအလဲတွေဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲ၊ သောက်နေတဲ့ဆေး၊ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ အရေပြားမှာ ပုံမှန်စုဝေးနေတဲ့ ပိုးမွှာတွေ အပြောင်းအလဲ စတာတွေကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဟော်မုနုးအပြောင်းအလဲမှာ ပြင်လို့မရတာတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးလိုကနေဖြစ်တာဆိုရင် ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရမယ်။
ကိုယ့်အရေပြား အမျိုးအစားက ဘာဖြစ်နေနေ စိတ်တိုင်းမကျတာဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရေပြားအထူးကု ပြပါ။ ရေးခဲ့တာတွေက တကမ္ဘာလုံးကစာဖတ်သူတွေအတွက် ခြုံရေးတာပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ သဘာဝ သနပ်ခါးစစ်စစ် ထက်ကောင်းတာ မရှိပါ။ သခွါးသီးလို အသီးအနှံတွေသုံးတာကလဲ တံဆိပ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဈေးကြီးကြီး ပေးရတာတွေထက် စိတ်ချရပါတယ်။
Skin Care Tips ဆယ်ကျော်သက် မျက်နှာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/skin-care-tips.html
Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြ...